Waa dalalkee shanta dal ee caalamka dadkoodu ay ugu cimriga dheer yihiin ? (Sawiro) – Xeernews24
Waa dalalkee shanta dal ee caalamka dadkoodu ay ugu cimriga dheer yihiin ? (Sawiro)
Dadka wadanka Japan ayaa waxaa ay jecel yihiin in ay cunaan badhaadha macaan iyo kalluunka, Jasiirada Okinawa ayaa waxaa ay ka mid tahay meelaha dadka ku nool ay da’adoodu ka badan tahay siddeetanka sano.
Wadanka Spain ayaa waxaa caan ka ah in dadka ay nastaan oo albaabada loo laabo goobaha ganacsiga saacada marka ay gaadho 2da duhurnimo iyadoo dib loo furo marka ay saacadu soo gaadho 5ta galabnimo.
Wadanka Singapore ayaa horumar dhinaca caafimaadka aasaasiga ah ka gaadhay iyadoo lagu tilmaamo in horumarkaas uu yahay mid door weyn ku leh in dadka u dhashay dalkaas uu celceliska da’adooda ay gaarto 83.1.
Dalkan ayaa ah dalka dhimashada carruurta iyo hooyooyinka umul raaca ugu yar caalamka isagoo ku gaadhay heerkaas ka shaqeynta daryeelka caafimaadka.
Wadanka Switzerland oo ka mid ah dalalka ugu qanisan qaarada Yurub ayaa celceliska dadka ku nool ay gaadhaan 81 sano,waxaana loo aaneynayaa daryeelka caafimaadka oo heer sare ah iyo heerka nolosha dadka oo sareysa.
Dalkan ayaa ah qiyaas la sameeyay waxa uu yahay dalka ugu badan caalamka ee laga isticmaalo fromage-ka iyo caanaha.
Dalka Koonfurta Kuuriya ayaa ah dalka ugu horeeya caalamka ee dadkiisa ay noolaan karaan illaa iyo 90 sano sida lagu shaaciyay cilmi baadhis dhowaan la sameeyay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/JABAN.jpg 351 624 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-18 10:04:302017-08-18 10:04:30Waa dalalkee shanta dal ee caalamka dadkoodu ay ugu cimriga dheer yihiin ? (Sawiro)
Baabuur la dulmarshay dad ku sugnaa goob loo dalxiis tago magaalada Barcelona... Daawo:Dhacdadii ugu murugada badneyd oo haatan kataagan Norway Aabe soomaaliyeed...